Aqoonyahannada S/L iyo goorta ay ka qaybgeli karaan horumarinta dalka – Somaliland Net
Home / Articles / Aqoonyahannada S/L iyo goorta ay ka qaybgeli karaan horumarinta dalka
admin November 5, 2016	Articles
This article is from our archives from 2008 – Qoraalkan waxa uu kamid yahay arkeeyfiyada shabkada Somaliland Net 2008.
Jan 01 2008 Achieve – Habeen dhexdaas ahayd ayaa waxaa telefishanka weyn ee Somaliland (SLTV) laga sii daayay barnaamij lagaga hadlayey dhallinyarta reer Somaliland ee wax baratay iyo doorka ay ku yeelan karaan waxtarka iyo houmarka dalkeenna. Waxa uu ahaa barnaamij dood ah oo runtii aad iyo aad iila qiima badnaa. Waxaan u qaatay in doodo jaadkan oo kale ah oo la helaa ay wax weyn ka tari doonaan dadaalka ay dadkeennu ugu jiraan in la meelmariyo dhaqan aqooneed oo shaqeeya iyo in wax la qabsado, oo nolosha hore loo wado.
Had iyo jeer maskaxda dadku waxay qabataa wixii lagu celceliyo, oo tusaale ahaan, haddii mar kasta arrin laga hadlo, sida sigaarkii in badan basaska dadweynuhu raacaan lagu dhex qiijin jiray joojintiisa oo kale, waxa ugu dambaynta la arkaa arrintii oo sidii la doonayay loo gartay, lana joojiyey. Maanta ma jirto maalin ay dadkeennu uga baahi badan yihiin in loo sheego dibudhaca ka dhalan kara caddaalad darrada, qaraabakiilka iyo in dad aan aqoon lahayn la tubo xafiisyada iyo goob kasta oo ay shaqo ka socoto iyada oo ay joogaan dadkeennii kale ee aqoonta lahaa; kuwaas oo wax weyn inoo qaban lahaa haddii aynu aqoontooda ama xirfadahooda ka faaï¿½iidaysan lahayn.
Somali Younger generations
Waxba yaanan ararta ku sii dheeraane, aan u galo dulucda qoraalkan hadda ina hor yaalla, taas oo ah mid igu dhalatay ka dib markii aan daawaday/dhegeystay barnaamijkaas isaga ah ee aan kor ku soo sheegay. Waxase aan ka horraysiinayaa ujeeddada qoraalka in aynu xasuusta ku hayno in aanay arrintu ku koobnayn oo keliya siyaasad, ee ay la xidhiidho dhinacyada nolosha oo idil. In aynu afeeftaas yar hadalka ka horreysiinno waxa keenay in dadkeennu mar kasta oo ay maqlaan aqoon iyo dad wax bartay ay u qaataan in loo jeedo in siyaasadda oo keliya la doonayo in la galo ama xillal la raadinayo. Runtii taas waxa ka muhiimsan ujeeddooyinka horumarineed iyo danaha wanaagsan ee aynu rabno in ay inoogu socdaan sida aynu doonayno.
Had iyo jeer waxaynu maqalnaa iyada oo laga hadlayo waxsoosaarka (khayraadka) dhulka, hase ahaato ee inta badan lagama hadlo sidii waxtar looga dhalin lahaa kartiyaha iyo aqoonta ku kaydsan qaybta ugu mudan dadkeenna ï¿½ dhallinyarta iyo dadka wax bartay ee arrimaha nolosha garansan (looma jeedo qof wax dhigtay, hase yeesho ee aan togagga nolosha iyo aqoonta akhris, waayoï¿½aragnimo iyo wixii la mid ah ku fahmin).
Jeerkan (waqtigan) la joogo bulshooyinka wax gartay, nadaamka qarannimadana ka midho-dhaliyey dadka aqoonta iyo xirfadaha kala duwan ku hubaysan waxay u arkaan qaybta ugu muhiimsan bulshada, ee ay laï¿½aanteed wax waliba qabyo noqonayaan. Dalalka qaarkood waxaba maanta ka jira wasaarado loo qoondeeyay miisaaniyad qorshaysan ama hayï¿½ado u gaar ah dadkaas, oo waxtarkooda casrigan maanta ah loo yaqaanno ï¿½waxsoosaarka dadkaï¿½(Human Resources).
Mar kasta oo horumar iyo horukac ummadeed laga hadlayo dadyowga inaga aqoonta badani waxay xeeriyaan in lagu kala baxo aqoon iyo dadaal. Laakiin innaga waxa nafcigii inaga qaaday dhaqan-hoosaad la iska qabatimay, oo inta badan laba arrimood ku caan ah. Labadaa arrimood midda hore waa habka ay bulshadu mar isugu timaaddo, mar kalena ku kala irdhowdo oo ah habka tolaysiga. Arrinta kalena waa in aan la qiimayn meel walba cidda ku habboon, ee meel kastaba la isla taago qof aan waxba garanayn oo lagu doodo: ï¿½Hebelow ninkan wasaarad hebla ama halkaa noo gee, wax ha noo keenee!ï¿½ Waxyaalahaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha caddaaladdii ay ahayd in aynu ilaashanno tumaatida ku noqday, waxqabadkeenniina hoos u dhigay.
ï¿½Ninkii af leh ayaa abaar ka baxaï¿½ murtida ah ayaa mararka qaarkood la soo qaataa. Aniguna waxaan odhan lahaa kuna dari lahaa: ï¿½Ciddii dhaqanka qarannimada iyo qiimaha ay aqoontu leedahay garata uun baa maanta mugdi ka bixi karta.ï¿½ In aynu sidaa nidhaahnaa waa gar, waayo maanta adduunka la isuma tudho, oo bulshadii danteeda garan weyda quwado kale oo ka xoog roon ayaa warjeefaya, xaqeeda weydaarinaya, kabahana la dulmaraya!
Maqaalkani ma aha kii quwado kale ama wax la mid ah ka hadli lahaa, hase yeeshee waxa habboon inta aynaan halkan ka gudbin in aynu caddayno in aynu waxyaalaha aynu soo sheegnay oo dhan jiritaankooda wada qirayno, oo aan la isku diiddanayn. ï¿½Haddaba haddii ay arrini sidaas tahay maxaa wax looga qaban waayey?ï¿½ ayey dadka qaarkood is weydiin karaan. Arrimo dhawra oo in wax laga qabto u baahnaa markii ay dadkeennu ku guuldarraysteen ayey ku maahmaaheen ï¿½Caado la gooyaa cadho Alle ayey leedahayï¿½! Laakiin kaasi waa marmarsiinyo aan macna lahayn, isla markaana aan inaga soconayn.
Qoraa weyn oo Shiv khera la yidhaahdo ayaa waxa uu qoray hadal uu macnihiisu u dhowaa: ï¿½In xalka la arko lana garto oo haddana lagu dhaqaaqi waayaa waa nasiibdarro weyn.ï¿½ Waa run. Iska indha-tiridda dhibaatooyinku ma baabbiï¿½iso jiritaankooda, ee waa ay sii badisaa.
Haddaba dhallinyarta wax baratay ama dadka kale ee aqoonta iyo hibada lehi waxa ay wax tari karaan oo keliya marka uu dadkoodu dhaqan-hoosaad kasta oo carqalad ah dhabaatadiisa garto, dhaqanka qarannimona u bislaado. Waynu is hafarnaa ee ilaa maanta cid xeerarka ama sharciyada innoo yaal u bisil oo dhaqan caddaalad ah ku dhiirranaysaa ma jirto. Laakiin, haddana wax badan ayeynu u guulaysannay, oo waxa la inooga baahan yahay in aynu dadaalka halkaa ka sii wadno, si aynu u gaadhno guulaha waaweyn ee aynu maanka ku hayno.
Haddii qiimaynta guud iyo caddaaladda loo bislaado aqoontu wax bay tari kartaa, waayo waxa yaraanaya leexleexadka iyo wax kasta oo aan daacadnimo ku salaysnayn. Waxa jira saddex erey oo ay aqoonyahannada maaddada maamulku ku tilmaameen ï¿½3-da E ee Maamulkaï¿½ (3 Eï¿½th of Management). Saddexdaa erey waxay kala yihiin: ï¿½Waxbarashoï¿½ (Education), ï¿½Tamar Badanï¿½ (Excessive Energy) iyo ï¿½Waayoï¿½aragnimoï¿½ (Experience). Waxay hoosta ku wataan tayooyin iyo kartiyo horumar kasta iyo waxqabad kasta oo la doonayo in lagu tallaabsado wax weyn ka tari kara. Laakiin waxay ka shaqeeyaan meelaha ay cilmiga iyo dhaqammada qarannimo ka jiraan, ee kama shaqayn karaan meelaha ay dhaqan-hoosaadyada dambeeyaa ka jiraan. Dalkeenna JSL, waa dal ay ka jiraan qarannimo fiican iyo dimuqraaddiyad xoogaysanaysaa , sidaa darteed dhaqan aqooneed iyo falsafad kasta oo horumarineed ba waa ay ka shaqayn karaan, hase yeeshee waxa ay ku xidhan yihiin hadba inta uu leï¿½egaado dadaalkeennu.
It's a human thing to work to together to achieve a common Goal and objectives, Let us work together and we will succeed.	Previous Good Travel Information and Advice.
Next Caku Talo Adduunyoy